Qvidian: Gini bu akwukwo egwu ahia? | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 4, 2013 Tọzdee, Eprel 4, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu nzukọ na-arụ ọrụ gafee ọtụtụ vetikal, na-enwe usoro dị mfe maka ndị ahịa gị iji chọta ma gosipụta ihe ngosi dị mkpa, iji okwu yana ozi ndị ọzọ dị oke mkpa maka ọsọ na ịdị ire nke ire ere ahụ. Qvidian akpọ nke a Akwụkwọ Ahịa.
Akwụkwọ ahịa Qvidian Ahịa bụ a igwe ojii dabeere na-eduzi na-ere n'elu ikpo okwu, tightly ike na Salesforce.com, na-enyere aka ahịa na ahịa isi streamline na sikwuo a ụlọ ọrụ ahịa usoro mee ngwangwa azụmahịa ibu ma melite ahịa otu arụpụtaghị na irè. Na-eme ka ikike nke ndị na-ere ahịa mechie azụmahịa ndị ọzọ, Qvidian Sales Playbooks na-emegharị usoro ahịa na-agbanwe agbanwe n'ofe otu nzukọ ma na-anapụta ọdịnaya ziri ezi na nkuzi maka usoro ọ bụla nke usoro ahịa.
Nke a bụ vidiyo… onye Dan ahụ na-ere ahịa gị?
Qvidian depụtara uru ndị na-esonụ:
Mee ọdịnaya ọ bụla site na ebe ọ bụla - Egwuregwu ire ahịa nwere ike ịbụ ụdị ọdịnaya ọ bụla-akwụkwọ, ihe ngosi, vidiyo, na multimedia ndị ọzọ-echekwara na ọnọdụ ọ bụla.
Drivegbọala Egwuregwu na Iwu Ndị Dị omimi - Draịvụ egwuregwu, nkebi, ma ọ bụ akwụkwọ egwuregwu niile dabere na mgbagha dabere na iwu siri ike kpatara data CRM, dị ka nha azụmahịa, ụlọ ọrụ, ndị asọmpi-mpaghara ọ bụla dị na CRM gị.
Ntinye egwu sitere na Playbook na CRM - Qvidian nwere ike na-akpaghị aka melite Ohere puru ma ọ bụ ogbo na Salesforce.com dabere na mmecha nke igwu egwu ma ọ bụ nkebi dị na akwụkwọ egwu.
Dọrọ omimi ma jiri nchịkọta ahịa siri ike - Site n’itinyezi omume omume ahia (dika esi eso ya na Playbook) yana data CRM gi, ị ga - enweta ahịa siri ike nchịkọta ike na ezi visibiliti na steeti gị ahịa nzukọ.
A na-enyekwa stats ojiji ọdịnaya yana ikpo okwu, na-enye ahịa ihe ọmụma ha chọrọ iji zụlite ọdịnaya ndị nwere ọchịchọ karịa na usoro ahịa.
Tags: Ugwuekeọdịnaya ahịaakwukwo ahiaihe ngosi ahianchekwa ahịaire ahia ikpe
Twilert: Alerts Email efu na Twitter
Mee 10, 2013 na 1: 24 PM
Hey Doug, Abụ m Onye Nlekọta Ahịa nke Ahịa maka Qvidian ma nwee ekele maka nkọwa dị mma nke ngwọta anyị nyere ndị debanyere aha gị. Zọ ọ bụla anyị nwere ike isi nweta njikọ ndị ahụ na v-enweghị-eso? Ga-ahụ gị n'anya ogologo oge 🙂
Mee ka anyi mara ma anyi nwere ike inyere gi aka n’uzo obula ma obu nye gi ihe omuma ma obu edemede.
Mee 10, 2013 na 3: 17 PM
Ndewo @ google-1209fb2b231f37c713a4d08e080ee7c8: disqus! Anyị na-esonyere ọtụtụ akụ ma na-emeghe njikọ ndị ahụ ka anyị wee ghara ile anyị anya dị ka ndekọ. Anyị nwere nnukwu obodo na ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ, agbanyeghị, yabụ ị ga-enweta ọtụtụ nlebara anya. (Short azịza: Mba) 😉